FAQ amin'ny fanangonana Kerbside betsaka - Filankevitry ny morontsiraka afovoany
Lisitry ny fako Kerbside Collections Mamandrika fanangonana Kerbside betsaka Mitatitra serivisy marobe tsy hita FAQ amin'ny fanangonana Kerbside marobe
F1: Rahoviana aho no afaka mamandrika famoriam-bola amin'ny sisin-dalana?
A: Ny famandrihana dia azo atao amin'ny Internet 24 ora isan'andro, 7 andro isan-kerinandro!
Tsidiho ny Mamandrika Pejy fanangonana Kerbside betsaka hanao famandrihana an-tserasera.
Raha te hamandrika an-telefaonina sy miresaka amin'ny mpandraharahan'ny Customer Service dia antsoy ny 1300 1COAST (1300 126 278) Alatsinainy hatramin'ny Zoma 8.30 maraina hatramin'ny 5 ora hariva.
Ny famandrihanao dia hatao amin'ny andro fanangonanao dabam-pako manaraka raha toa ka atao iray andro fiasana feno mialoha ny famandrihana. Tsy afaka misafidy daty manokana hanaovana ny serivisy ianao.
F2: Rahoviana no hitranga ny famoriam-bola be dia be?
A: Ny fanangonam-bokatrao betsaka amin'ny sisin-dalana dia hatao amin'ny andro fanangonanao dabam-pako manaraka raha toa ka vita ny famandrihana iray andro fiasana feno mialoha farafahakeliny, raha tsy izany dia hitranga amin'ny herinandro manaraka ny fanangonana.
Azafady, jereo ny tabilao etsy ambany ho an'ny fe-potoana famandrihana:
Andro fanangonana Bin: Alatsinainy Talata Alarobia Alakamisy Zoma
Famandrihana amin'ny Call Center alohan'ny amin'ny 5 ora hariva amin'ny: Alakamisy Zoma Alatsinainy Talata Alarobia
Mamandrika an-tserasera alohan'ny misasakalina amin'ny: Alakamisy Alahady Alatsinainy Talata Alarobia
Ny famandrihana atao amin'ny alàlan'ny tranokala amin'ny asabotsy na alahady dia tsy ho vita raha tsy ny alatsinainy.
F3: Nahoana aho no tsy afaka mametraka takelaka mitambatra ho an'ny fanangonana?
A: Noho ny mety hisian'ny fibre asbestos dia tsy misy board compressed composite hangonina. Boards compressed composite (araka ny voalaza etsy ambany) TSY avela hapetraka ao amin'ny fanangonanao amoron-dalana. Raha hita ny iray amin'ireo zavatra ireo, CLEANAWAY dia tsy afaka manangona misy ny fako betsaka anao.
Ny vokatra tsy mifanaraka amin'izany dia ahitana: fibre na inona na inona (vaovao na antitra), asbestos sheeting, fibre simenitra simenitra, fibre reinforced simenitra vokatra, Blue Board, Hardiplank na compressed fibre sheeting. CLEANAWAY amin'ny anaran'ny Central Coast Council dia manana zo handà tsy hanangona enta-mavesatra misy an'io akora io na akora mitovy amin'ireo karazana vokatra ireo noho ny mety hisian'ny fibre asbestos.
Tsidiho azafady ity tranokala manaraka ity raha te hahitana safidy fanariana: http://www.epa.nsw.gov.au/managewaste/house-asbestos.htm
F4: Navelan'izy ireo ny sasany tamin'ireo entana napetrako ho an'ny fanangonam-bola be dia be. Nahoana?
A: Misy antony roa mahatonga ny zavatra navela:
1. Ny entana sasany dia tsy mety amin'ny serivisy fanangonana amin'ny sisin-dalana. Avereno jerena azafady ny pejy torolalana ato amin'ity tranokala ity mba hijerena raha ao anatin'ny lisitry ny 'tsy ekena' ireo entana tavela.
2. Ny haben'ny fanangonanao dia nihoatra ny zonao isan-taona. Ny ankabeazan'ny tokantrano dia mahazo fanangonam-bokatra 6 isan-taona. Ny fanangonam-bokatra tsirairay dia tsy tokony hihoatra ny 2 metatra toratelo ny habeny, izay eo ho eo amin'ny fahafahan'ny tranofiara boaty mahazatra. Raha mihoatra ny zonao isan-taona ianao dia tsy hanaisotra ireo entana be loatra.
F5: Tsy voaangona ny fanangonako Kerbside betsaka. Nahoana?
A: Misy antony roa mety tsy nesorinay ny fanangonam-bokatrao amin'ny sisin-dalana:
1. Rehefa nitsidika ny tranonao izahay, dia tsy nisy entana navoaka ho fanangonana. Tsarovy ny mametraka foana ny entanao amin'ny sisin-dalana ho fanangonana ny hariva mialoha satria mety hanomboka aloha ny serivisy. Na dia tsy esorina aza ny ankamaroan'ny fanangonana raha tsy amin'ny 7:00 maraina, ny sasany dia azo atao aloha kokoa mba hisorohana ny fitohanan'ny lalana amin'ny ora be.
2. Ny fiara na ny sakana hafa dia nanakana ny mpamily anay tsy haka ireo fitaovana.
3. Tsy voarakitra an-tsoratra izany. Tsy maintsy voafandrika mialoha ny serivisy rehetra amoron-dalana. Ataovy azo antoka fa raketinao ny laharan'ny famandrihana nomena rehefa manao famandrihana.
4. Tsy hitanay ny adiresinao. Tsy ny trano rehetra no mora hita amin'ny adiresin'ny arabe fotsiny. Raha tafiditra ao anatin'ity sokajy ity ny fanananao dia omeo antsipiriany momba ny toerana misy anao mandritra ny famandrihanao mba hanampiana ny mpamily anay hahita ny fanananao.
5. Naseho tamin'ny fomba nanasarotra ny mpamily anay ny nanala azy ireo. Avereno jerena azafady ny pejy torolalana raha mila fanazavana momba ny fomba tokony hanehoana ny fanangonanao amin'ny sisin-dalana.
6. Tao amin'ny fananan'olon-tsotra no nisy ny entanao fa tsy teo amoron-dalana. Tsy hiditra ao amin'ny tranonao ny mpamily anay haka ny fako.
7. Mety ho be dia be ny fako fanampiny natolotra tamin'ny fanangonana, satria maro ny mponina no manao ambanin-javatra ny fako hatolony rehefa mamandrika. Mety hahatonga ny fanangonana sasany ho vita raha tsy ny ampitso.
8. Mety ho diso ny fanangonanao.
Raha te hitatitra serivisy tsy hita, tsidiho ny anay Mitatitra serivisy marobe tsy hita page.
F6: Azoko atao ve ny manafoana na manova ny famandrihana famoriako Bulk Kerbside Collection?
A: Tsia. Raha vantany vao voavahan'ny famoriam-bola ny sisin-dalana dia tsy azo ovaina na foanana. Raha tsy misy zavatra apetraka eo amin'ny sisin-dalana, dia mbola esorina ao amin'ilay trano ny zo 1 amin'ny sisin-dalana.
F7: Tsy manana famoriam-bola betsaka sisa tavela amin'ny taona aho. Rahoviana izy ireo no haverina amin'ny fanangonana 6?
A: Ny ankabeazan'ny tokantrano dia mahazo fanangonam-bokatra 6 isan-taona. Ny fanangonam-bokatra tsirairay dia tsy tokony hihoatra ny 2 metatra toratelo ny habeny, izay eo ho eo amin'ny fahafahan'ny tranofiara boaty mahazatra. Raha mihoatra ny zonao isan-taona ianao dia tsy hanaisotra ireo entana be loatra. Averina amin'ny famoriam-bola 6 isan-taona ny fahazoan-dàlana amin'ny sisin-dalana marobe amin'ny 1 febroary.
F8: Vao nifindra trano vaovao aho ary ny tompony/mpanofa teo aloha dia nampiasa ny zo rehetra amin'ny Bulk Kerbside. Afaka averina ho ahy ve ireo?
A: Indrisy anefa fa raha misy mpanofa, tompony na tompona teo aloha mampiasa ny 6 amin'ireo famatsiam-bola ireo ao anatin'ny fe-potoana manomboka ny 1 febroary ka hatramin'ny 31 janoary isan-taona, dia tsy misy intsony raha tsy amin'ny volana febroary manaraka satria ny famatsiam-bola dia ho an'ny trano.
F9: Namandrika famoriam-bola 1 be dia be aho, fa ny tranokala dia milaza fa nampiasa bebe kokoa aho. Nahoana?
A: Ny habe ambony indrindra amin'ny fanangonana iray dia 2 metatra toratelo (eo ho eo amin'ny fahafahan'ny tranofiara boaty mahazatra). Raha toa ka tsy namandrika fanangonam-bokatra betsaka ianao mba handrakofana ny fako napetrakao teo amin'ny sisin-dalana, dia azo alaina ny fanangonam-bokatra fanampiny avy amin'ny zo anananao mba handrakofana ny fako ariana mba hanesorana azy ho anao.